MAHAJANGA : Manao famelabelarana arahana adihevitra mandritra ny roa andro ny oniversite
Sehatra iray ifanakalozan’ireo profesora matihanina avy amin’ny ankolafim-pampianarana sy mpikaroka maro no handrakotra ny am-pahatelon’ity famelabelarana arahina adihevitra momba ny fianarana ambony sy ny tontolon’ny asa ity. 15 octobre 2019
Sambany no nisy teo anivon’ny oniversite teto Mahajanga izao andiany voalohany natao izao, raha efa hetsika fahefatra nandritra ny fitantanan’ny filoha vaovaon’izany oniversite izany teto an-toerana. Nifanitsa-kitro ireo mpianatra manovo fahalalana ao sy ireo tanora mpianatra vao afaka bakalorea tamin’ny taon-dasa ary ireo vao niatrika izany tamin’ity volana ity.
Anisany nisongadina tao ny mahakasika ny zavatra miandry ny mpianatra iray hitady asa sy ny miandry azy rehefa tonga eo amin’ny tontolon’ny asa. Novoaboasan’ireo profesora matihanina tao ny fomba hifidianana izay mety ho sampam-pianarana ho an’ireo tanora aorian’ny fahazoany ny bakalorea.
Taorian’ny kabary nifandimbiasan’ny tompon’andraiki-panjakana sy nanokafan’ny profesora Dinaraly Odilon Tiandraza, filohan’ny oniversiten’i Mahajanga ity "forum des étudiants et métier" ity dia nanao tohivakana ny fandraisam-pitenenana. Ny filohan’ny Tranoben’ny antenimieran’ny varotra sy indostria eto Mahajanga no nisantatra izany, izay nampahafantarany ireo karazana fampiofanana arak’asa. Notohizan’ny dokotera Faharano Marcel sy i Tombomiadana Sabine, mahakasika indray ny fitadiavan’asa sy ny tontolo manodidiana izany.
Ny mpampianatra mpikaroka na mpikaroka mpampianatra profesora Rabesa Zafera Antoine indray no nanohy ny ambaindain’ny fikarohana izay nataony, raha i dokotera Ralison Saholy Nirina, holafitry ny Odonto-stomatologie no namarana ny andro voalohany.
Ny andro faharoa, izay mbola nanasana ireo mpianatra ihany dia ny tontolon’ny fitantanan-draharam-panjakana, no novelabelarin’ i Todivelo Cyrile tao, raha i Brady Patrick no nitondra fanazavana momba ny fizahan-tany sy ny trano fandraisam-bahiny. I Judith Rachelle Rakotovao avy ao amin’ny orinasan-tserasera Rtn eto Mahajanga indray avy eo no niantsoroka ny tontolon’ny asa fanaovan-gazety ho an’ny mpianatra manaraka izany lalam-piofanana izany. Mahakasika ny tontolo iainana, satria tsy vitsy ny mpianatra eny amin’ny oniversite misafidy io lalam-piofanana iray io, dia nohazavain-dRemisy Séraphin tao ny momba izany, ary Andriamiadana Mihajasoa, mpitantana ny Mada composte no namarana tanteraka ny famelabelarana natao nandritra ny roa andro tetsy amin’ny Tranoben’ny antenimieran’ny varotra sy indostria. Tamin’ny farany dia nisy ny tomban’ezaka nataon’ny dokotera Hdr Razafimahefa nialoha ny kabary fanakatonana ofisialy ny famelabelaran-kevitra narahina adihevitra nataon’i profesora Dinaraly Odilon Tiandraza, filohan’ny oniversiten’i Mahajanga ity.
Tsy hadino tamin’ity hetsika ity ny tranoheva miisa 17, nentina nampahalalana ny lalam-piofanana azo ratovina eto Mahajanga. Niezaka nitsidika izany ireo mpianatra nanatrika ny fotoana. Ankoatra ny lalam-piofanana efa misy ao amin’ny oniversiten’i Mahajanga dia teo koa ireo trano heva fampirantiana niarahana tamin’ny oniversite tsy miankina maro eto an-toerana. Marihina fa 167 no isan’ny mpampianatra, raha 594 kosa ny mpiasa birao ary 11 097 ny isan’ny mpianatra mandrato fahalalana eny amin’ny oniversiten’i Mahajanga tamin’ity taom-pianarana farany ity.
Sekoly doktoraly miisa telo no heverina hatsangana amin’ity taom-pianarana ity, ary Institut na Ivon-toeram-pampianarana ambony roa kosa, dia ny Iostm sy Ufrss any Mandritsara no efa mihodina amin’izao fotoana izao. Tanjon’ny hetsika dia hampivelatra bebe kokoa ny fahafahana safidy ataon’ny mpianatra aorian’ny fahazoana ny bakalorea sy ho fanampiana azy ireo hikaroka ny lalam-piofanana sahaza ho azy, hifandraika amin’izay asa iriny hatao rehefa rahatrizay. Araka izany, mbola hisy ny andiany manaraka ho an’izany "forum des étudiants et métier" atao eto Mahajanga sy amin’ireo faritra hafa aorian’ity andiany voalohany sady sambany ity, hoy hatrany ny tompon’andraikitry ny oniversite eto Mahajanga.